Bala isiseko solawulo: imizekelo eyahlukeneyo yokubala | Ezezimali
Bala isiseko solawulo
Encarni Arcoya | | Ngqesho
Elinye lawona manqanaba abalulekileyo oKhuseleko lweNtlalo, ngaphandle kwamathandabuzo, sisiseko sokulawula. Eli ligama elaziwayo kodwa lihlala lididekile nesiseko segalelo, xa enyanisweni ingazizo iikhonsepthi ezifanayo. Kwaye kuloo nto siyongeza ukubala isiseko solawulo kuxhomekeke kwisibonelelo osifunayo.
Isiseko sokumisela sisetyenziselwa ukubala izibonelelo ezininzi, ezinjengokungaqeshwa, ipenshoni yomhlala-phantsi, ukukhubazeka okwethutyana ... Kodwa ibalwa njani? Zithini izikali? Ngaba kukho ifomula? Siza kuthetha ngako konke oku kungezantsi.
1 Yintoni isiseko sokulawula
2 Indlela yokubala isiseko sokulawula
3 Bala isiseko semimiselo yentswela-ngqesho
4 Bala isiseko semimiselo yomhlala-phantsi wakho
5 I-BR yokuzimela
6 I-BR yenzuzo yokubeleka kunye neyenzala katata
Yintoni isiseko sokulawula
Into yokuqala ekufuneka uyazi malunga nesiseko solawulo yinkcazo yayo. Kwaye kukuba sinokuqonda kwisiseko sommiselo ngolu hlobo lulandelayo:
"Isikali esisetyenziswa ngoKhuseleko lwezeNtlalo ukuseka izibonelelo umsebenzi afanele ukuba nazo."
Oko kukuthi, kunjalo Esinye sezixhobo ezisetyenziswa nguKhuseleko lweNtlalo ukumisela ukuba ngaba umsebenzi unelungelo lokufumana isibonelelo kwaye, ukuba kunjalo, ibiya kuba yintoni ingeniso enokuhambelana naye (imali azakuyifumana ngenyanga) kunye nexesha aza kuqokelela ngalo loo mali.
Kwelinye icala, isiseko sommiselo sixhomekeke kwisiseko segalelo ukuze sibalwe. Ngamaxesha amaninzi, omabini amanqanaba anika inani elifanayo, kodwa kukho amaxesha apho oku kunganyanzelekanga ukuba kube njalo.
Indlela yokubala isiseko sokulawula
Ngeli thuba sifuna ukusebenza ngakumbi kwaye sikunike isikhokelo apho uyazi ukuba ungasibala njani isiseko sommiselo ngokwezibonelelo ezahlukeneyo onokufikelela kuzo. Kwaye kukho umahluko phakathi kokubalwa kwentswela-ngqesho kunye nentswela-ngqesho, okanye ukukhubazeka okwethutyana. Ke ngoko, apha ngezantsi sihlule umxholo ophambili kwiindawo ezininzi.
Ngokubanzi, Ukwazi ukuba yintoni isiseko somgaqo womntu kufuneka uqale wazi ukuba yintoni isiseko senkxaso yaloo mntu. Nje ukuba unayo, ifomula iya kuxhomekeka ekubeni ufumana umvuzo wakhe ngenyanga okanye yonke imihla.
Ukuba yinyanga nganye, indlela yokubala iya kuba:
Isiseko senkxaso / iintsuku ezingama-30 (nokuba inyanga ineentsuku ezingaphezulu okanye ezimbalwa).
Ukuba yimihla ngemihla, ifomula iya kuba:
Igalelo / isiseko senani leentsuku zenyanga (apha inefuthe lokuba inyanga ineentsuku ezingaphezulu okanye ezimbalwa).
Eso siphumo siphumayo iya kuba sisiseko sakho sommiselo. Nangona kunjalo, into eqhelekileyo kukuba inani elifunyenweyo lelethuba elide. Njengoko siza kubona apha ngezantsi, kuxhomekeke kwisibonelelo, isiseko esiphezulu somrhumo siya kuthathelwa ingqalelo, esiya kuthi senze isiseko solawulo sikhulu.
Bala isiseko semimiselo yentswela-ngqesho
Inzuzo yokungasebenzi, okanye inzuzo yokungaqeshwa, isebenzisa isiseko sokulawula ukubala ukuba loluphi ukhuseleko lweNtlalo oluza kukuhlawula. Kodwa, ukuqala iinkqubo kuyimfuneko ukuba umntu zidweliswe iintsuku eziyi-180.
Ngamanye amagama, ukubala isiseko sommiselo, iziseko zegalelo leentsuku ezili-180 ezidlulileyo ziyafuneka. Nje ukuba ufumene, ukongeza kwaye wahlulelene, uya kuba nakho ukwazi ukuba yeyiphi i-quota eya kuthi ihambelane nawe, kodwa ulumke, ayizukuba ngunaphakade, kodwa iya kumiselwa lixesha.
Ukongeza, kuphela kwiinyanga ezintandathu zokuqala oya kuthi ufumane i-6% yesiseko, ngelixa, ukusukela ngomhla we-70, umrhumo wehla uye kwi-181%.
Bala isiseko semimiselo yomhlala-phantsi wakho
Ukubala isiseko sokulawula ipenshoni yomhlala-phantsi kufuna ukuba ube neziseko zegalelo lalo msebenzi usesandleni. Ayisiyiyo kuphela yonyaka ophelileyo, kodwa eyiminyaka eliqela eyadlulayo.
Ngokukodwa, ukubala isiseko sokumisela umhlala phantsi iziseko zegalelo kule minyaka ingama-24 idlulileyo ziyimfuneko (Kwimeko ka-2022 iyakuba yiminyaka engama-25). Kuya kufuneka udibanise zonke iziseko zegalelo ngokudibeneyo (ukuba ziyafana, zonke ziya kuphindwa-phindwa). Ke, kuya kuhlala kuphela ukufaka ifomula ekuya kuthi, kule meko.
Iziseko zegalelo (isimbuku sazo sonke, esiya kuba ngama-288 sisonke) / 345.
Isizathu sokuba kubekho ama-345 kungenxa yokuba, nangona okwenziweyo kukubala iziseko zegalelo kuthathelwa ingqalelo ukuba zili-12 ngenyanga, xa kufikwa kumba wokuqokelela umhlala-phantsi, iintlawulo ezongezelelweyo nazo ziyadlala kwaye zichaphazela ifomula. Ke, ukuba ngo-2021 bayi-345, kwimeko ka-2022 izakuba phakathi kwama-350 kuba iintlawulo eziqhelekileyo nezongezelelweyo ezifunyanwa nyaka ngamnye zithathelwa ingqalelo (iintlawulo ezimbini zeminyaka engama-25).
Iziphumo ziya kuba sisiseko sakho sommiselo. Kodwa hayi eyona nto uza kuyifumana ngepenshini.
Kwaye, njengoko kusekwe nguKhuseleko lweNtlalo, uya kufumana:
I-50% ukuba uneminyaka eli-15 yenkxaso (ubuncinci).
I-100% yesiseko sommiselo ukuba uneminyaka engama-35 okanye nangaphezulu yegalelo.
Kodwa lumka, kuba ukusukela ngo-2027, ukufumana i-100% yesiseko, kuyakufuneka ube neminyaka engama-37 yegalelo.
Nangona abantu abazisebenzelayo bengenalo ilungelo lokufumana isibonelelo sokungabikho kwemisebenzi, kukho inani elifanayo kubo: ukuphela komsebenzi. Kwaye iyakuphenjelelwa sisiseko solawulo esinalo lo mntu uziqeshileyo.
Ukuyibala, kuyimfuneko ukuba baneziseko zegalelo kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo, ngendlela yokuba ubadibanise kwaye usebenzise ifomula ngaphambili:
Iziseko zegalelo (isimbuku sazo zonke iinyanga ezili-12 ngaphambi kokupheliswa) / iinyanga ezili-12. Le yindlela ofumana ngayo isiseko sokumiswa kokuphela komsebenzi.
Ngoku, awuyi kuhlawulisa i-100% yale nto, kodwa enyanisweni into oyakuyibiza iya kuba yi-70% yesiseko sommiselo.
Okwangoku, oku kuya kuba ngaphezulu kweenyanga ezili-12 ukuba nje ubuncinci iinyanga ezingama-48 zemirhumo. Ngokumalunga nexesha elincinci, iya kuba ziinyanga ezimbini (apho kuya kufuneka ube negalelo phakathi kweenyanga ezili-2 nezili-12).
I-BR yenzuzo yokubeleka kunye neyenzala katata
Kokubeleka kunye nokuba nguyise, isiseko solawulo esiza kuthathelwa ingqalelo sifuna ukuba Isiseko somrhumo senyanga ngaphambi kwekhefu lokubeleka okanye likatata (Okokugqibela kuya kungqamana nomhla wokuzalwa komntwana).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Bala isiseko solawulo
Ukuhlaselwa kwe-cyber kwakutshanje kwi-SEPE kunye neziphumo zayo